हृदयको लागि अभ्यास गर्दछ
स्वास्थ्य महिलाहरुको लागि व्यायाम
धरतीमा धेरै मानिसहरूको हृदय हृदय रोगबाट दैनिक मृत्यु हुन्छ। मानिसहरू हिँड्ने, फास्ट फूडमा स्विच गर्थे र आफैंलाई तुरुन्तै मृत्युदण्ड दिइन्। हृदयको लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण व्यायाम बुझ्नको लागि, हामीले शरीरलाई रगत आपूर्ति प्रणाली बुझ्न आवश्यक छ।
हरेक मांसपेशी एक सानो हृदय हो
हाम्रो परिसंचरण प्रणालीमा हृदय र रगतका भाँडाहरू हुन्छन्, जसका कारण 20% ठूला धमन र रेजहरू हुन्छन्, र 80% कैपिलियरी हुन्छन्। क्याप्लिरीहरू सबै भन्दा सानो भाँडा हुन्, तर तिनीहरू बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्छन्। हृदय धमनीको माध्यमबाट रगत पिउन्छ, र गति र रक्तचाप को खर्चमा क्यान्सरहरू सम्म पुग्छ। नतिजाको रूपमा, जब त्यहाँ गतिको कमी छ, क्याप्लिरीहरू रक्तसँग पूर्ण रूपमा आपूर्ति गर्दैनन्, जसको अर्थ ऊ ऊतकको पोषण बिग्रन्छ, जुन सबै भन्दा सानो भाँडाका "आपूर्ति" मार्फत तर्काउँछ। यस अवस्थामा, हामी प्रत्येक मांसपेशी एक पंप हो कि - हृदय को एक कमजोरी कम गर्दछ। यदि मांसपेशिहरु काम गर्दछ, प्रत्येक सेल यसको "खुट्टा" खुराक हुन्छ।
हृदयलाई बलियो बनाउन अभ्यास गर्दछ - यो कुनै पनि प्रकारको कार्डियो (यो कार्डियो भनिँदैन), लोड। र हृदय महत्त्वपूर्ण तीव्रता र अवधिको लागि होइन। जब तपाईं कसरत बाट पसीने राम्रो कार्डियो हो।
समयमा अनैतिक समयको भौतिक गतिविधिको बीचमा, हृदयको लागि सबैभन्दा उपयोगी व्यायाम स्विमिंग , दौड, बाइकिङ र छिटो हिँडाइमा छन्। यस अवस्थामा, यो महत्वपूर्ण हो कि आन्दोलन जर्क्स (बास्केटबल तेज तेज छलांग को रूप मा मानिन्छ, उदाहरण को लागि, दिल को लागि धेरै हानिकारक), तर अन्तरिक्ष मा एक चिकनी र लगातार आंदोलन देखि।
हृदयको लागि कम्प्लेक्स
हामी हृदयको प्रशिक्षणको लागि एक अभ्यास अभ्यास गर्नेछौं र एकै समयमा शरीरमा अधिक वजन जलाउँछौं।
हामी आफ्नो घुटनों झुकाउँछौं र हातमा जुत्ता साथ गतिशील गतिमा सास फेर्न र सास फेर्ने गर्दछौं।
छातीको सामने ह्यान्ड्स - squats। हामी छातीको सामने हातमा एक सेट गर्छौ, हात उठाउँदै, र विकर्ण संग छेउको हातको साथ। स्क्वाट्सलाई हृदयको लागि सबैभन्दा सन्तुलित कार्डियो अभ्यास मानिन्छ, त्यसैले यो ध्यान केन्द्रित गर्न योग्य छ।
हामी एक टाँगेबाट अर्कोतर्फ पारेर कुखुरामा हाम्रो हातमा झुन्ड्याउँदै।
छेउमा देखिने हातहरू एकै ओर घुमाउनुहोस्, खुट्टा तल फटेको छैन, घुँडा घुमाउँदैन।
हामी हातमा खस्दा बेला घिमिरे र कुकुरको वरिपरि घुमाउनुहोस्।
तपाईंको सामने हातहरू, हामी दिशामा वैकल्पिक रूपमा हात हाल्छौं, जस्तै लोचदार ब्यान्डको हातमा। त्यसोभए हामी एकै साथ "खींच" गरौं।
हामी कचौरा हौं, हामी हाम्रा हातहरू तान्छौं, तल उठ्छौं, उठाउनुहोस्, हाम्रा हातहरू उठाउनुहोस्।
हामी squat, हामी शरीर को पैर मा वजन ले, उठ उठ र छाती को लागि तुलसी पैदल खींचो।
हामी तिरबाट हिँड्छौं।
खुट्टा क्यान्सर भन्दा ठूलो छन्, हतियारहरू हाम्रो सामने फैलिन्छन्, हामी हतियार उठाउँदछौं र तिनीहरूलाई जोड्दछौं।
हामी हाम्रा हातहरू कम गर्छौं, तिनीहरूलाई क्यान्सरको स्तरमा उठाउनुहोस् र आईपीमा कम गर्नुहोस्।
क्यान्सरको स्तरमा हतियार छोड्नुहोस्, छातीको सामने तिनीहरूलाई झुक्याउनुहोस्, सीधा र तलाकलाई तिरस्कार गर्नुहोस्।
वजन घटानेको लागि साइकल
मोटो जलने को लागि कार्डियो
जुत्तामा बस्न कति छिटो छ?
हिप्सको लागि व्यायाम गर्नुहोस्
घरमै पेट कसरी सफा गर्ने?
स्टाट कसरी ठीक गर्ने?
स्तन वृद्धिको लागि अभ्यास गर्दछ
घुँडाका लागि व्यायाम गर्नुहोस्
पासामा प्रेस कसरी पम्प गर्ने?
छातीको मांसपेशीलाई कसरी द्रुत पार्ने?
Dumbbells संग biceps मा व्यायाम
प्रेसको लागि साइकल अभ्यास गर्दछ
घर ब्लेंडर कसरी छनौट गर्ने?
गरम कैंचीको साथ कपाल कट्टर - प्रक्रियाको सबै सबट्याटिज
जर्मन महिलाहरु को तल जैकेट
एक रात्रि चिकित्सक कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, एक चिकित्सक जान्छ र कुन सल्लाह पालन गर्ने?
सेलुलाइट देखि हनी मसला
घृणात्मक छाती माटोपैथी - उपचार
कस्तो रंग हरी छ?
स्नानमा कसरी छानबिन गर्ने?
पुल कसरी पाउनु हुन्छ?
माछा को बल संग सूप
2013 को गर्मीमा कसरी स्टाइलिशली लुगा लगाइयो?
बच्चालाई खुट्टामा किन दुख्छ?
पवित्र माथनले कस्तो मदत गर्छ?
फ्लोरियर हवाई अड्डा
तपाईंको तालिकामा भारतको टुक्रा: चिकन मसला
बच्चाहरु को लागि कार्टून2वर्ष पुरानो
राम्रो पर्चीको लागि घरमा स्किस् कसरी स्नेह गर्ने?
गाजीनिया - खुल्ला मैदानमा रोपण र हेरचाह गर्ने
ओवनमा पटाईहरू - सबैभन्दा स्वादिष्ट घर-पकाउने व्यञ्जनहरू
Kamianets-Podilskyi - आकर्षण